Kylie Jenner ရဲ့ အလန်းလွန် အလွန်လန်းတဲ့ ဖက်ရှင်များ။ – SoShwe
Home/Entertainment/Kylie Jenner ရဲ့ အလန်းလွန် အလွန်လန်းတဲ့ ဖက်ရှင်များ။
Kylie Jenner ရဲ့ အလန်းလွန် အလွန်လန်းတဲ့ ဖက်ရှင်များ။
So Shwe January 30, 2022	Entertainment Leaveacomment
အသက်၂၄ နှစ်အရွယ် ဟောလီဝုဒ်အကျော်အမော် Kylie Jenner ဟာ Super Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kendall Jennerရဲ့ ညီမဖြစ်ပြီး Kardashians ညီအမတွေဖြစ်တဲ့ Kim Kardashian ၊ Khloe Kardashian နဲ့ Kourtney Kardashian တို့ရဲ့ အမေတူအဖေကွဲညီအမတွေဖြစ်ပါတယ်။
Kardashians မိသားစုကို သဘောကျနှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ “Keeping Up with The Kardashians” လို့အမည်ရတဲ့ Reality Show ကိုကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေဟာ ချစ်စရာကောင်းပြီး သွက်လက်တဲ့ Kylie ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး အခုချိန်မှာလည်း သမီးလေး Stormi ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ Kylie ကို မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kylie Jenner လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အပြစ်ဆိုစရာမရှိလောက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကိုယ်ပိုင်အလှကုန်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်ထားနိုင်တဲ့ ဘီလျံနာမလေးကို တန်းမြင်ကြတော့တာပဲနော်။ ဒါ့အပြင် Kylie ရဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေဟာလည်း သူ့ရဲ့အသက်အပိုင်းအခြားအလိုက်ကို ပြောင်းလဲလာတာမို့ Kylie ရဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုလည်း အောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ၂၀၂ဝခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ Kylie
၂။ ၂၀၂ဝခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာTom Fordရဲ့ New York Fashion Weekကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Kylieရဲ့ဖက်ရှင်။
၃။ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှာ Kylieရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်။
၄။ ၂၀၁၉ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း သမီးလေး Stormiနဲ့အတူ အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Kylie ရဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ဖက်ရှင်။
၅။ ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလအတွင်း Kylie ရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်။
၆။ ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Met Gala ကို ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်သဖွယ် ဝတ်ဆင်ပြီးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Kylie
၇။ Met Gala ပွဲအပြီးပါတီကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Kylie ရဲ့ ဖက်ရှင်။
၈။ သမီးလေး Stormi ကို မွေးပြီးတာတောင်မှ မိမိုက်နေတဲ့ မေမေ Kylie
၉။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Grammy ဆုပေးပွဲကို ပန်းနုရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Kylie
၁၀။ Beauty and The Beast ထဲက နှင်းဆီပန်းလေးသဖွယ်။
၁၁။ ဂျင်းဝတ်စုံကို Kylie လောက်စတိုင်ကျအောင် ဝတ်နိုင်တဲ့သူရှိပါ့မလား?
၁၂။ Adidas’s Gas Station Pop-up ပွဲကို အဖြူအမဲဝတ်စုံလေးဝတ်ခဲ့တဲ့ Kylie
၁၃။ ရွှေရောင်ဆံပင်လေးနဲ့ အမဲရောင်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး လန်းနေတဲ့ Kylie
၁၄။ MTV တေးဂီတဆုပေးပွဲကို တက်ရောက်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Travis Scott ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကို အားပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးချောလေး။
၁၅။ Gwen Stefani နဲ့ ထင်မှတ်မှားခံခဲ့ရတဲ့ Kylie Jenner
၁၆။ Barbie အရုပ်မလေးသကဲ့သို့။
၁၇။ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းဟောင်း Jordyn Woods နဲ့အတူ။
၁၈။ နယူးယောက်မြို့ရဲ့ ညနေခင်းအလှနဲ့အပြိုင် လှပခံ့ညားနေတဲ့ Kylie
၁၉။ ၂၀၁၈ခုနှစ် Met Gala ပွဲမှာမြင်ရတဲ့ Kylie ရဲ့ဖက်ရှင်။
၂၀။ ၂၀၁ရခုနှစ် Met Gala ပွဲကို ရွှေအိုရောင်ဆံပင်တို နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အသားရောင်ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Kylie
Kylie Jenner ရဲ႕ အလန္းလြန္ အလြန္လန္းတ့ဲ ဖက္ရွင္မ်ား။
အသက္၂၄ ႏွစ္အရြယ္ ေဟာလီဝုဒ္အေက်ာ္အေမာ္ Kylie Jenner ဟာ Super Model တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Kendall Jennerရဲ႕ ညီမျဖစ္ၿပီး Kardashians ညီအမေတြျဖစ္တဲ့ Kim Kardashian ၊ Khloe Kardashian နဲ႔ Kourtney Kardashian တို႔ရဲ႕ အေမတူအေဖကြဲ ညီအမေတြျဖစ္ပါတယ္။
Kardashians မိသားစုကို သေဘာက်ႏွစ္သက္တဲ့ ပရိသတ္ေတြဟာ “Keeping Up with The Kardashians” လို႔အမည္ရတဲ့ Reality Show ကိုၾကည့္ဖူးၾကမွာပါ။ အဆိုပါအစီအစဥ္ကိုၾကည့္တဲ့သူေတြဟာ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး သြက္လက္တဲ့ Kylie ရဲ႕ငယ္စဥ္ဘဝလႈပ္ရွားမႈေတြကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အခုခ်ိန္မွာလည္း သမီးေလး Stormi ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္တဲ့ Kylie ကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
Kylie Jenner လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အျပစ္ဆိုစရာမရွိေလာက္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္အလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ကိုယ္ပိုင္အလွကုန္ပစၥည္းကုမၸဏီတည္ေထာင္ထားႏိုင္တဲ့ ဘီလ်ံနာမေလးကို တန္းျမင္ၾကေတာ့တာပဲေနာ္။ ဒါ့အျပင္ Kylie ရဲ႕ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေတြဟာလည္း သူ႔ရဲ႕အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ကို ေျပာင္းလဲလာတာမို႔ Kylie ရဲ႕ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈေတြကိုလည္း ေအာက္မွာေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
၁။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္တဲ့ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းနဲ႔ Kylie
၂။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင္နာTom Fordရဲ႕ New York Fashion Weekကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Kylieရဲ႕ဖက္ရွင္။
၃။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွာ Kylieရဲ႕ ပြဲတက္ဖက္ရွင္။
၄။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း သမီးေလး Stormiနဲ႔အတူ အျပင္ထြက္တဲ့အခါမွာ ဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့ Kylie ရဲ႕ ေပါ့ပါးတဲ့ဖက္ရွင္။
၅။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း Kylie ရဲ႕ ပြဲတက္ဖက္ရွင္။
၆။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ Met Gala ကို ဗီလိန္ဇာတ္ေကာင္သဖြယ္ ဝတ္ဆင္ၿပီးတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Kylie
၇။ Met Gala ပြဲအၿပီးပါတီကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Kylie ရဲ႕ ဖက္ရွင္။
၈။ သမီးေလး Stormi ကို ေမြးၿပီးတာေတာင္မွ မိမိုက္ေနတဲ့ ေမေမ Kylie
၉။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Grammy ဆုေပးပြဲကို ပန္းႏုေရာင္ဝတ္စံုေလးနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Kylie
၁၀။ Beauty and The Beast ထဲက ႏွင္းဆီပန္းေလးသဖြယ္။
၁၁။ ဂ်င္းဝတ္စံုကို Kylie ေလာက္စတိုင္က်ေအာင္ ဝတ္ႏိုင္တဲ့သူရွိပါ့မလား?
၁၂။ Adidas’s Gas Station Pop-up ပြဲကို အျဖဴအမဲဝတ္စံုေလးဝတ္ခဲ့တဲ့ Kylie
၁၃။ ေရႊေရာင္ဆံပင္ေလးနဲ႔ အမဲေရာင္ဝတ္စံုဝတ္ၿပီး လန္းေနတဲ့ Kylie
၁၄။ MTV ေတးဂီတဆုေပးပြဲကို တက္ေရာက္ၿပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Travis Scott ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈကို အားေပးခဲ့တဲ့ ဇနီးေခ်ာေလး။
၁၅။ Gwen Stefani နဲ႔ ထင္မွတ္မွားခံခဲ့ရတဲ့ Kylie Jenner
၁၆။ Barbie အ႐ုပ္မေလးသကဲ့သို႔။
၁၇။ အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း Jordyn Woods နဲ႔အတူ။
၁၈။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ညေနခင္းအလွနဲ႔အၿပိဳင္ လွပခံ့ညားေနတဲ့ Kylie
၁၉။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ Met Gala ပြဲမွာျမင္ရတဲ့ Kylie ရဲ႕ဖက္ရွင္။
၂၀။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ Met Gala ပြဲကို ေရႊအိုေရာင္ဆံပင္တို နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ အသားေရာင္ဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့ Kylie
Previous ကော်ဖီပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေး။
Next Credit Card အသုံးမပြုသင့်သည့် နေရာ (၅) ခု။